အောက်တိုဘာလ 22, 2017
နိုဝင်ဘာလ 1, 2017
Published by ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ at အောက်တိုဘာလ 30, 2017
ပြောင်းရွှေ့များအတွက်ပြည့်စုံလမ်းညွှန် ဒူဘိုင်း။ အဓိကအားဖြင့်လုပ် နိုင်ငံတကာကစားသမားဘရှာဖွေနေသူများအတွက်။ အဘယ်အရာကိုတကယ်သင်လုပ်နိုင်သည် ဒူဘိုင်းတွင်မျှော်လင့်ထား? ။ ယူနိုက်တက်အာရပ်သို့မပြောင်းမီသင်လုပ်နိုင်သည့်အရာများစွာရှိသည် စော်ဘွား။ မြို့တော်တိုင်းတွင်၎င်းပိုင်ဆိုင်သည် လက္ခဏာနှင့်ဆိုးကျိုး။ အထူးသဖြင့်ကအရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် ပတ်သက်. ကြွလာလျှင်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်တစ်ဦးဖတ်သင့် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်မည်သို့အပေါ်အသေးစိတ်လမ်းညွှန်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သေချာသင်ငွေအလုံအလောက်နဲ့ရဲစွမ်းသတ္တိရှိစေ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအသစ်သောအသက်တာကိုစတင်.
ကျနော်တို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်သည် ဒူဘိုင်းမှရွေ့လျား. အသစ်တစ်ခုကိုတိုင်းပြည် Moving တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်စိတ်ညစ်စရာတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ အများစုအဖြစ်တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကျွမ်းကျင်သူများအလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မှဒီအဆင့်ကိုယူ အမှုအရာဒေသအလိုက် go မည်သို့မျှမသင့်လျော်သောသို့မဟုတ်လက်တွေ့ကျတဲ့အသိပညာအတူ။ ဟုတ်လား ကနေတိုးရစ်များအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာ လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်။
ဒါဟာ၏ 80% ကျော်ကြောင်းဖော်ပြရကျိုးနပ်သည် ဒူဘိုင်းရဲ့ နေထိုင်သူများဖြစ်ကြသည် မြို့ထဲမှာနေထိုင်ခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကျွမ်းကျင်သူများ။ အဲဒီအမှုကိုပြုခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်သို့သောအကြောင်းအဘယ်သူမျှမသင့်လျော်သောသတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူမြို့မြို့သို့ရောက်လေ၏။ ၏ 70 ကျော်% ဒူဘိုင်းမုဆိုးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ WhatsApp ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဘယ်ကဒူဘိုင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုတင်စီစဉ်မတိုင်မီအကြံပြုလိုတယ်ဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးလိုအပ်သောနှင့်လိုအပ်သိရန် အမှုတို့ကိုပြုနေကြသည်ကိုဘယ်လိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက် တို့ကိုကျင့်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ။ ဤတွင်ကျွန်တော်တစ်ဦးနှင့်အတူသငျသညျကိုတင်ပြ ပြီးပြည့်စုံသောလမ်းညွှန် ဘို့ ဒူဘိုင်းမှရွေ့လျား.
ဒူဘိုင်းတစ်အခွန်လွတ်ပတ်ဝန်းကျင်ပေမယ်၏ကုန်ကျစရိတ်ကမ်းလှမ်းသော်လည်း မြို့ထဲမှာနေထိုင် အနည်းငယ်စျေးကိုအဆမတန်မြှရနိုင်သည်။ ထို့ကွောငျ့, သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာနေလျှင် တစ်ဦးကိုစတင်ရန် ရာထူး အဲဒီမှာ, ထို့နောက်သင့်ရဲ့လစာသင့်ရဲ့အခြေခံလူနေမှုကုန်ကျစရိတ်ကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်သေချာအောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းဧရိယာစျေးအကြီးဆုံးမြို့အဖြစ်အသိအမှတ်ပြု အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အသက်ရှင်ရန်.
၏ကုန်ကျစရိတ်များ ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင် တစ်ခုခုကိုအမှု၌။ အမြဲတမ်းအိမ်အပြင်စားသောက်ဆိုင်နှင့်မြို့အပြင်ဘက်တွင်ထမင်းစားခန်းများပါ ၀ င်သည်။ ဖျော်ဖြေမှုရရန်နှင့်သင်၏စာရင်းသွင်းရန်အချို့သောပျော်စရာရှိခြင်း ကလေးတွေ ကျောင်းတွေမှာ။ ထို့အပြင်အသုံးအဆောင်များ, ကားအာမခံနှင့်အတူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး။ သင်လာသောအခါအားလုံးတ ဦး တည်းအတွက်လာ အိန္ဒိယကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်ဒူဘိုင်းမှရွေ့လျား.
သင်တစ်ဦးစတူဒီယိုတိုက်ခန်း၏ပျမ်းမျှနှစ်စဉ်ငှားရမ်းခကုန်ကျစရိတ် 62,000 AED ရောက်ရှိသည်ကိုသင်တို့သိသင့်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏စစ်ဆေးသင့် တစ်ဦးငှားရမ်းစတူဒီယိုတိုက်ခန်းရှာဖွေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အထူးသဖြင့်ဒူဘိုင်း၌တည်၏။ အမ်းမရိတ်အတွက်ငှားရမ်းခကုန်ကျစရိတ်အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များသည်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုပြုရပါမည် သငျသညျမိသားစုနှင့်အတူရွေ့လျားကြသောအခါ။ ဘယ်တော့လဲ ဒူဘိုင်းမှရွေ့လျားကျွမ်းကျင်သူများ ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်သည့်အခါအချို့အပိုကုန်ကျစရိတ်များပဲရှောင်ရှားမရနိုငျကွောငျးသိရသငျ့သညျ။ ထိုသို့သောပိုင်ဆိုင်သို့မဟုတ်ငှားရမ်းကားတစ်စီး, အီလက်ထရောနစ်ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူအကောင်းဆုံးကျောင်းများကောက်နေအဖြစ် သင့်ရဲ့ကလေးတွေကိုအဘို့။ ပင်အကောင်းဆုံးကျောင်းများအသစ်တခုဖွင့်လှစ် ဒူဘိုင်း ကျောင်းဝင်းနောက်နှစ်။
ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်၏ကုန်ကျစရိတ်, သင်ထွက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် သင်တစ်ဦးသည်အိန္ဒိယကျွမ်းကျင်သူများကဲ့သို့ရှိရသည့်အခါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကဖြစ်ပါတယ်စကားပြော ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်နိုင်ဖို့အတော်လေးစျေးကြီး။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, 2020 ကုန်စည်ပြပွဲသည်အထိဈေးနှုန်းများသည်မိုဃ်းကောင်းကင်အထက်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်။ ဒူဘိုင်းမှလာမယ့်အသစ်သောစီမံကိန်းများကြောင့်ဖြစ်သည်။ နှင့်ပိုပြီး အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေနေကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ။ သငျသညျ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူအသေးစိတ်လမ်းညွှန်နှင့်အခြေခံစျေးနှုန်းများစစ်ဆေးရွှေ့ခင်မှာ ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်.
ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီမူတည်အတွက်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ် သငျသညျအလွန်လွယ်ကူသည်ပြောင်းရွှေ့ဘယ်မှာ။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင်လိုအပ်ချက်အချို့လိုအပ်သည် နေရာအဲဒါတွေအားလုံးကဘဏ်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်။ ပုံမှန်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ရန်သင်လိုအပ်သည် ဒူဘိုင်း၏နေထိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်။ သို့သော်ရေရှည်တွင်အချို့ဘဏ်များကိုခွင့်ပြု ကျွမ်းကျင်သူများနေထိုင်သူများ ငွေစုအကောင့်ဖွင့်လှစ်ရန်။ သို့သော်ထိုကိစ္စတွင်ဘဏ်ဖြစ်သည် မန်နေဂျာ လုပ်ရမည်နိမ့်ဆုံးချိန်ခွင်လျှာကန့်သတ် setting ။ လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုသင်လိုအပ်သည် နေထိုင်ခွင့်စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်, မူရင်းအဖြစ်တစ်ဦးမိတ္တူ။ နှင့်သင့်အလုပ်ရှင်ထံမှအချို့ကိစ္စစာတစ်စောင်၌တည်၏။ အဘယ်သူမျှမကန့်ကွက်လည်းမရှိ, ထိုနှင့်စပ်လျဉ်း အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေဖြင့်.
ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင်စောင့်ရှောက်သူ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အများကြီးပိုခက်လာပြီ။ နီးပါးတိုင်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူ တစ်ဦးအကြောင်းကိုကြားသိ ဒူဘိုင်းအတွက်ဘဏ္ဍာရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ အထူးသဖြင့်, စူပါအစာရှောင်ခြင်းကြီးထွားလာနေသောဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများအကြောင်းကို။ သို့သော်အသက်အဘို့မဟုတ်တိုင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ချမှတ်ခြင်းဤနည်းကိုတက်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုမ္ပဏီတွေဥပမာအချို့ အလုပ်အကိုင်ဒူဘိုင်းဘဏ်ဖြတ်တောက်မှု ထဲမှာ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလာပြီကြောင်းသင်သိရှိရမည် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများနေ့စဉျခက်လာပြီ။
ဘဏ်မန်နေဂျာနှင့်အတူအတွက်အင်တာဗျူးသွားဥပမာ။ သငျသညျဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရဖို့ MBA ဘွဲ့လက်မှတ်ပေး။ အပြုသဘောဘက်တွင်, သင်အမြဲအခြေခံရာထူးအချို့ကိုမှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်နိုင်ပါသည်။ အရောင်းလက်ထောက်သို့မဟုတ်ငွေရှင်းကောင်တာတွင်အဖြစ်ဥပမာ။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, အမှု၌သင်တို့ဘဏ်လုပ်ငန်းအတွက်လုံလောက်အောင်အတွေ့အကြုံကမရှိဘူး။
အဆိုပါအလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများအဖြစ်အစာရှောင်ကိုသူတို့ထင်အဖြစ်ငှားရမ်းထားမည်မဟုတ်ပါ။ အထူးသဖြင့်မဆိုဘို့ စီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးကအောက်ပါ။ Thomson Reuters နှင့် ယောဘသည် Pro ကိုအတွေ့အကြုံရှိကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များငှားရမ်းနေကြ သို့ သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုတင်ပါ.
သငျသညျရှာတှေ့နိုငျဘယ်မှာဒူဘိုင်းလူဦးရေရဲ့တစ်ဝှမ်း 85% မှကျွမ်းကျင်သူများ ဖိလစ်ပိုင်စကားကိုပြောတတ်သောပြည်တော်ပြန်။ ဟိန္ဒီနှင့်အူဒူနှင့်ဘင်္ဂါလီများလည်းပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်အခြားဘာသာစကားများစွာအပြင်တမီးလ်၊ တဂါးလော့ဂ်၊ ပါရှန်း၊ တရုတ်၊ အာရပ်ဘာသာစကားသည်ရုံးသုံးဘာသာစကားဖြစ်သော်လည်း ယူအေအီး, ဒူဘိုင်းတွင်အင်္ဂလိပ်စကားပြောအများဆုံးစကားဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့အလုပ်အကိုင်များ ယူအေအီးအတွက်ဖုန်းခေါ်စင်တာစစ်ဆင်ရေးအဖြစ်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်.
ဒူဘိုင်းအတွက်ပြောပြီ Arabic အဘိဓါန်၏4မျိုးရှိပါတယ်။ ထိုသူတို့က Maghrebi အာရဗစ်, Egyptian Arabic အဘိဓါန်များသည် Gulf Arabic နှင့် Levantine Arabic အဘိဓါန်။ သို့သျောလညျး, ဒူဘိုင်းအတွက်ပြောပြီလူကြိုက်အများဆုံးသင်သည်ဘာသာစကား Arabic နှင့်အင်္ဂလိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအချက်များအရမော်ဒန် Standard Arabic အဘိဓါန်လည်းမရှိအားလုံး Arabic အဘိဓါန်ပီခြင်းဖြင့်နားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။ တစ်ဦးကပြီးပြည့်စုံ ဒူဘိုင်းမှရွေ့လျားများအတွက်လမ်းညွှန်သင်တို့အဘို့ဖြစ်သနည်း.
သငျသညျ Arabic သို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောအရိုးစုကိုပဲဖြစ်ဖြစ်, ကပြောလုံခြုံ ကျွမ်းကျင်သူများအသကျရှငျ, လက်ရှိတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြောင်း အမ်းမရိတ်၌တည်၏။ သို့မဟုတ်ပင် sta မှဒူဘိုင်းနှင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးသွားရောက်ကြည့်ရှုy ကိုသငျသညျကွောငျ့ ကိုလိုက်ရှာသည် ဒူဘိုင်းဂျော့ဘ်. အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်အင်္ဂလိပ်စကားပြောနေကြသည်လျှင်။ ဒေသခံတွေနှင့်အတူသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှငျ့ဆကျသှယျမဆိုအခက်အခဲများတွေ့ကြုံခံစားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတွင်လည်းကြီးမားသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း သင်လိုအပ်သောကျင့်ဝတ် တစ်ခရီးသွားကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်နောက်တော်လိုက်ရန်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, သင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအင်္ဂလိပ်စာသင်ယူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် သင်စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်မှာအလုပ်လုပ်စတင်ရန်ရှာကြသည်လျှင်။ စကားမစပ်ပဲဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီမဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျကယျြပွနျ့အတွေ့အကြုံရှိသည်ဖို့လိုအပ် သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်ပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်လျှင် အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၌တည်၏။
ဒူဘိုင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းမပြုမီ, ကျွမ်းကျင်သူများကိုမွို့ပူကြောင်းကိုငါသိ၏သငျ့သညျ။ သြဂုတ်လတစ်လအပူဆုံးသည်အဘယ်မှာရှိလူအပေါင်းတို့သည်အချိန် ဒူဘိုင်းအတွက်တစ်လ 36 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (96 ° F) ၏ပျမ်းမျှအပူချိန်နှင့်အတူ။ ဇန်နဝါရီလ 19 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (66 ° F) တွင်ရောက်ရှိသောအပူချိန်နှင့်အတူယခုနှစ်အအေးဆုံးလအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုဖြစ်ပါတယ်သွားရမည်။ ဒါဟာအတော်လေးခက်ခဲရရှိသွားတဲ့ ကော်ဖီခွက်ထဲမှာပန်းခြံသို့မဟုတ်အလိုလိုကျလှနျးခွငျးအတွက်လမ်းလျှောက်ခံစားရန်။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားစေရန်, အဆောက်အဦးအပြင်ဘက်စူပါပူသောရာသီဥတုဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ဟာ က hard နေထိုင်သူများခံစားရန်စေသည် လဟာပြင် outing ။ လေအေးစက်နေရာတိုင်းဖြစ်ကြပြီးအဘယ်ကြောင့်ဤ ကျနော်တို့ပညာရှင်ပီသစွာအားလုံးကျွမ်းကျင်သူများနှင့်နေထိုင်သူများအကြံပေး ကရယ်စရာကောင်းလောက်အောင်အအေးအိမ်တွင်းရရှိသွားတဲ့အဘို့ထိုသူတို့အပေါ်တစ်ဦးဂျာကင်အင်္ကျီရှိသည်။
အထူးသဖြင့်ဒူဘိုင်းနဲ့အဘူဒါဘီအတွက်ရာသီဥတုအခွအေနေ။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြောပါကအားလပ်ရက်ပတ်ပတ်လည်အားလုံးတစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယူအေအီးသွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သူလူတိုင်းသိတယ် ဒူဘိုင်းအသက်ရှင်ဖို့အံ့သြဖွယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မိုးလေဝသရေကူးခြင်းနှင့်စျေးဝယ်များအတွက်ရုံကြီးလှ၏။ သင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏မြို့တော်ထဲမှာရှာတှေ့နိုငျနောက်ထပ်အံ့သြစရာကောင်းတဲ့အရာ။ အဘူဒါဘီ၌ Skydiving သို့မဟုတ် ဒူဘိုင်းရဲအံ့သြဖွယ်အားကစားကားများ။ ဒါဟာကြိုးစားရန်ကိုချစ်သူတိုင်းလူတစ်ဦးအဘို့အဖွင့်အံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ကျနော်တို့အလွန်အမင်း ကြိုးစားရန်အသစ်သောဧည့်သည်များအဘို့အကြံပြု။ အထူးသဖြင့်နွေရာသီအဘို့, စော်ဘွားနေရောင်ခြည်မိုဃ်းကောင်းကင်အောက်၌တစ်ရုံ-အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှအားလပ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်။
တဖန်သင်တို့လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်အပျော်အပါးများအတွက်ဒူဘိုင်းလာရောက်လည်ပတ်ကြသည်ဖြစ်စေ, လူတိုင်းပဲ "ဒါချေါတဲ့အရသာရှိသည်ဟူ.သာဒူဘိုင်းအတွေ့အကြုံ"။ ထွက်ရှာရန် ကဒူဘိုင်းအတွက်ဘယ်လိုဖြစ်ပါသည် ကြည့်ပါ ဦး WhatsApp ကိုဆက်သွယ်ပါ Jobs Group ။
အတော်များများကအရက်လွတ်လပ်စွာထဲမှာဖြန့်ဝေသောအထင်အမြင်ရှိ ဒူဘိုင်း၏စော်ဘွား။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့အများပြည်သူအတွက်အရက်သောက်သုံးခြင်းထောင်ထဲကိုရောက်ရှိနိုင်မယ့်ပြစ်ဒဏ်နှင့်အတူတရားမဝင်ဖြစ်ပါသည်, ဖြစ်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်း၏စော်ဘွားတွင်ဤအချက်များအရက်သာဟိုတယ်များ, အရက်ဆိုင်များတွင်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပေးထားသောနှင့် တိကျတဲ့စားသောက်ဆိုင်နှင့်အပန်းဖြေသာ.
ဒူဘိုင်းမြို့ ဟုတ်ပါတယ်၊ မွတ်စလင်ဘာသာတရားပါ၊ ဒါကြောင့်အရက်အလွန်အကျွံခွင့်မပြုပါဘူး မင်းရှိနေရင်တောင် အမ်းမရိတ်အတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေနေ။ အလုပ်ရှာဖွေသူများအများစုကအခြားနိုင်ငံများတွင်ပြုကြသကဲ့သို့သငျရုံကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှုံ့ဆျောနိုငျသညျ။ ရုံအရက်ဆိုင်ကိုသွားပြီးသောက်ဖမ်းပြီး။ ရှိပါတယ် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်ဤမျှလောက်များစွာသောအခြားအကန့်သတ် သင်စတင်ရန်သတိပြုရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ google က။ တကယ်လို့များဒုက္ခရောက်ရင်မင်းနဲ့အမြဲတမ်းစကားပြောနိုင်ပါတယ် ရဲတပ်ဖွဲ့။ အပြုသဘောဘက်မှာ, ကအားလုံးဒဏ်ငွေဖြစ်သင့်သည် သင်ရုံခရီးသွားလာခြင်းနှင့်သာဒူဘိုင်းသွားရောက်လည်ပတ်လျှင်.
ဒူဘိုင်းမှရွေ့လျားများအတွက်တစ်ဦးကပြီးပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်သင်အဘို့ဖြစ်၏ ?. အရက်ကို အသုံးပြု. မရရန်သင့်တာသေချာ ?. သငျသညျဒူဘိုင်းများအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား.
ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, ဒူဘိုင်းရဲ့မီထရိုများသောအားဖြင့်7ထံမှနေသောအလုအယက်နာရီအတွင်းခရီးသည်နှင့်အတူထုပ်ပိုးဖြစ်ပါတယ် 10 မှဖြစ်ကြောင်းကိုအကြာတွင် 4.30 ညနေသို့မဟုတ်ဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့် 8pm ။ , တက္ကစီအားဖြင့်အကောင်းဆုံးအချိန်ခရီးသည်လာတဲ့အခါ ဘယ်နေရာမှာမဆိုမြန်ဆန်စွာရရန်လမ်းများအလုပ်များနေကြသည်မဟုတ်ရှိရာညမှာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျး, သငျရှိမရှိကားတစ်စီး, ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်တက္ကစီအားဖြင့်ခရီးသွားလာဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြသင့်သည်, လမ်းများများသောအားဖြင့်ပိတျဆို့နတေဲ့အခါအချိန်ကိုက်အထူးသဖြင့်ကုန်တိုက်ကြီးတွေ, ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုများနှင့်ကမ်းခြေတဝိုက်သောကြာနေ့နေ့လည်ခင်းပေါ်နှင့်စနေနေ့ဖြစ်ပါတယ် ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်များ။ ထိုအသင်တို့ကိုလည်းလျှင် ဒူဘိုင်းရှိကျွမ်းကျင်သူများအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ရှာဖွေနေ။ သင်လျှောက်ထားစေခြင်းငှါအချို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။
နောက်ထပ်ယုတ် ဒူဘိုင်းအတွက်ဒေသခံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 2014 အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည့်ဓါတ်ရထားဖြစ်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းရဲ့ခေတ်သစ်ဘက်ပေါင်းစုံအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်။ ဒူဘိုင်းရဲ့ဓါတ်ရထားမွို့၌ရှိသမျှသောသော့ချက်နေရာများကိုရန်လွယ်ကူလက်လှမ်းနှင့်အတူခရီးသည်ပေးပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် Jumeirah သဲသောင်ပြင် Residence, ဒူဘိုင်းရှိ Marina, စီးပွားရေး ဒေသများနှင့်အယ်လ် Sufouh လမ်း။ ဒါဟာဒူဘိုင်းဓါတ်ရထားကိုလည်းမက်ထရိုဘူတာကိုဆက်သွယ်နိုင်မလည်းဖော်ပြရကျိုးနပ်သည်။ အပြုသဘောဘက်တွင်, သငျသညျအခြားလူမျိုးစုများနှင့်အတူစကားပြောနိုင်သည်။ ဒါကအမှန်တကယ်လည်းယူအေအီးသို့လာရောက်လည်ပတ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အင်ဒီးယန်းများအတွက်, အများကြီးရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ။ သင်အလွယ်တကူအင်္ဂလိပ်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိမည်သူမဆိုနှင့်အတူစကားပြောနိုင်ပါတယ်။
ခရီးသွားဧည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်သည့်အပြင်ဒူဘိုင်းကူးတို့ရှိပါသည်။ ကြောင်းခွင့်ပြုဆိုလို တမြို့လုံးကိုကြည့်ရှုဖို့ဧည့်သည်များ ပင်လယ်မှနှင့်၎င်း၏လှပသော skyline နှင့်အထင်ကရအဆောက်အအုံများအတွက်ညှို့။ အများကြီးရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ် ယူအေအီးအစိုးရအားဖြင့်ပြုသောအမှု။ သင်တန်း၏ဤအံ့သြဖွယ်မြို့တော်ကိုမြှင့်တင်ရန်။ အဘူဒါဘီနဲ့ဒူဘိုင်းပိုပြီးဧည့်သည်များဆောင်ခဲ့၏ရည်ရွယ်ချက်.
သစ်တစ်ခုကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်ဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းထားမေ့လျော့။ အတိအကျ, အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကြိုးစားလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အပေါ်ရဖို့ တစ်ဦးအလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှုလက်ခံရရှိရန်။ အပြုသဘောဘက်ခြမ်းတွင်အများအပြားစုဆောင်းဖြစ်ပါတယ်ရှိပါတယ် သငျသညျဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေအသုံးပွုနိုငျကွောငျးကိုန်ဆောင်မှုများ။ ဒါဟာမလွယ်ကူပါ အလုပ်ရှာပါ ဒူဘိုင်းမှာ။ ယူအေအီးအတွင်း၌လူများစွာရှိသည်။ ဘယ်သူရှာဖွေတွေ့ရှိချင်တယ် ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီများနှင့်အတူကြီးမြတ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို? ဒီအတွက်ကြောင့် ဒူဘိုင်းအတွက်ပြည်ပအလုပ်အကိုင် ဒါရေပန်းစားသည်။
ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေရန်အခြားသောပေါ်ပြူလာလမ်း။ မြို့ကိုသွားဖြစ်တယ်, ဒူဘိုင်းအတွက်လမ်းလျှောက်-in ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းရှာဖွေနေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များမြင့်မားနှင့်အတူစကားပြောရင်ဆိုင်ရဖို့မျက်နှာအကြံပြု စုဆောင်းမှုမန်နေဂျာ။ သင်ငှားရမ်းမန်နေဂျာမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုရောင်းချနိုင်ပါလိမ့်မည်ဆိုပါကကြောင့်ဖြစ်သည်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်, သင် အဆိုပါစုဆောင်းမှုတိုက်ပွဲတွေလည်းအနိုင်ရပါလိမ့်မယ်.
ဒူဘိုင်းအတွက် WhatsApp ကိုအဖွဲ့များ
WhatsApp ကို Recruitment Group သည်နေ့တိုင်းစူပါလျင်မြန်စွာကြီးထွားနေသည်။ ကြီးထွားလာ၏အကျိုးဆက်အဖြစ်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ် မိုဘိုင်းဖုန်း ယူအေအီးရှိ 50,000 အလုပ်ရှာဖွေသူများအတွက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည် အလုပ်ရှာဖွေနေ ဒူဘိုင်းရှိအုပ်စုများ။ ကူညီခြင်း၏အာရုံကိုအတူ ဒူဘိုင်းအတွက်ပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်စတင်ရန်ရှာဖွေနေကြသူအလုပ်ရှာဖွေသူများ။ သူတို့ဖြစ်ရှာကြသည်အထူးသဖြင့်လျှင် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အစာရှောင်ထားရှိ။ ဒါကြောင့်မင်းတို့ဒူဘိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းညွှန်ကိုဖတ်ပြီးသကဲ့သို့ သင်ယခုaရရန်ကြိုးစားသင့်ပါတယ် အလုပ်အကိုင်အအိပ်မက်မက်။ Dubai City သည်လူနေမှုဘ ၀ အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဆိုအလုပ်လျှောက်လွှာကိုမပို့နဲ့လား။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ စုဆောင်းရေးအဖွဲ့။ Is အစဉ်အမြဲနေရာချခံရဖို့ကျွမ်းကျင်သူများကူညီပေးနေ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျမြားကိုလညျးကုမ္ပဏီများမှငှားရမ်းကိုကြည့်သင့်ပါတယ်။ Careerjet နှင့် Monster ပင်လယ်ကွေ့။ သူတို့ကသင်၏ CV နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။
ဒူဘိုင်းမှရွေ့လျားများအတွက်တစ်ဦးကပြီးပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်က WhatsApp ကိုကောင်းမွန်သည် ?.
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌တည်၏။ သင်လုပ်နိုင်သည် ပိုလန်လည်းဥရောပတိုက်တွင်အလုပ်အကိုင်အအုပ်စုများကိုရှာဖွေ။ အထူးဖိုရမ်များ ယူအေအီးအသစ်ပြည်တော်ပြန်များအတွက်။ တောင်မှသင်ကအနည်းငယ်ပုဂ္ဂလိကအုပ်စုများရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏မြို့တော်အတွင်းငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအကြံဉာဏ်ကိုရနိုင်ဘယ်မှာ။ အပြုသဘောဘက်တွင်စမတ်နည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အမိုဘိုင်းဖုန်းစုဆောင်းမှုဝန်ဆောင်မှု.
တွေ့ရှိချက်တစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောလမ်းညွှန် ဒူဘိုင်းတွင်ကောင်းသောအမှုကိုငှားရမ်းကုမ္ပဏီ။ ယူအေအီးတွင်သင်စတင်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းရှာလိုလျှင်ဤနည်းလမ်းသည်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ WhatsApp ကိုအုပ်စုများ ယူအေအီးတွင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရန်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်တို့မူကားငါတို့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ ကမ္ဘာမြေအပိုင်းအပေါ်စီးတီးကြီးထွားလာအမြန်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသေချာတဲ့ပြီးပြည့်စုံသောအဘို့ဖြစ်၏ ဒူဘိုင်းမှရွေ့လျားဘို့ကိုလမ်းညွှန်.
လည်းရှိပါတယ် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့နည်းလမ်းအနည်းငယ်။ ဒါပေမယ့်အတူတူ ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့အင်ဒီးယန်း။ စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတွင်အလုပ်ရှာဖွေနေသောအခြားနိုင်ငံများလည်းရှိသည်။ ဥပမာ, ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာနေကြသူပါကစ္စတန်။ ယူအေအီး၌အကြှနျုပျတို့၏န်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရနိုင်ကြသည်။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်ရှင်များရှာဖွေခြင်း။ အထူးသဖြင့်မတိုင်မီခက်ခဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်လာသည် ကုန်စည်ပြပွဲ 2020.
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်အထူးသဖြင့် အသစ်သောကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်။ ကြောင့်ကုန်စည်ပြပွဲစီမံကိန်းများကို 2020, သင်အလုပ်တစ်ခုရဖို့အစာရှောင်ခြင်းပြုမူသင့်တယ်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ရရှိနိုင်အလုပ်အကိုင်များ သငျသညျ CV ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ။ သငျသညျကြှနျုပျတို့ကုမ်ပဏီရန်သင့်အဆင့်မြှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေးပို့ပါလိမ့်မယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ထိုမှတပါး, ဒူဘိုင်းကိုတရားဝင်တစ်ခုလုံးကိုအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအများဆုံးသွားရောက်ကြည့်ရှုဦးတည်ရာဖြစ်လာသည်။
ကောင်းပြီ, ငါတို့ကောင်းသောပေးနေကြသည်အဖြစ် လမ်းပြ ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူယခုသင်ကသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်လမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အရှာဖွေနေစတင်နိုင်ပါသည်။
အောက်တိုဘာလ 30, 2019
ကူဝိတ် - ဘာတန်ဖိုးရှိလဲ
ပြည်ပမှာကားတစ်စီးငှားရမ်းခြင်း (နှင့်ပိုပြီး) ။ Expats အတွက်လမ်းညွှန်။
ကူဝိတ်အတွက်ဘာစာရွက်စာတမ်းများ? ကူဝိတ်သို့ဗီဇာကပိုလန်နိုင်ငံသားများအားကူဝိတ်၏ပိုင်နက်သို့ပြောင်းရွှေ့ရန်ခွင့်ပြုသည့်စာရွက်စာတမ်းမှာဗီဇာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဝါဆောရှိကူဝိတ်သံရုံးတွင်ရရှိနိုင်သည်။ စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုရရှိရန် (3 လထက်မပိုသောကာလအတွက်) နောက်ထပ်နည်းလမ်းများမရှိဘဲကူဝိတ်ရှိလေဆိပ်တွင် ၀ ယ်ယူခြင်းဖြစ်သည်။ ကူဝိတ်အတွက်ခရီးသွားဗီဇာကိုင်ဆောင်သူသည်ထွက်ခွာသည့် နေ့မှစ၍ အနည်းဆုံး6လအတွင်းသက်တမ်းရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူများသာဖြစ်လာနိုင်သည်။ ဗီဇာကြေးမှာ3KWD ဖြစ်သည်။ ၎င်းတန်ဖိုးသည် 35-40 PLN ပတ်ပတ်လည်အတက်အကျရှိသည်။ ကူဝိတ်အဘယ်ငွေကြေးယူ? KWD ကူဝိတ် Dinar! ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့နှင့်ဝိုင်းရံထားသည့်နေ ၀ င်ချိန်၌တောက်ပနေသောကမ်းခြေများ၏ကူဝိတ်ပင်လယ်အော်အပေါ်လှေနှင့်သင်္ဘောများဖြင့်အလှဆင်ထားသောဆိပ်ကမ်းသို့ပြန်လာမည့်သူများအားကြာရှည်စွာအမှတ်ရလိမ့်မည် သူတို့ရဲ့အမြင်အားဖြင့်ဒီအမြင်လေးစားဖို့အခွင့်အလမ်း။ ထို့အပြင်ကူဝိတ်သို့အလည်အပတ်ခရီးသည်အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးတွင်အကြီးဆုံးငါးမွေးမြူရေးဆိုင်ရာသိပ္ပံစင်တာကိုတွေ့မြင်ရန်အလွန်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အာရေဗျပင်လယ်ကွေ့တွင်ပင်လယ်ရေနေသတ္တဝါများငါးမန်းများအပါအ ၀ င်စုစည်းထားသည်။ ဤဆွဲဆောင်မှုများအားလုံးကိုသင်၏မျက်လုံးများနှင့်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်မထွက်ခွာမီ“ ကူဝိတ်ဘယ်ငွေကြေးလဲ” ဟူသောမေးခွန်း၏အဖြေကိုသတိရသင့်သည်။ - ကူဝိတ်ငွေကြေးသည်ခရီးသွားများအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောခရီးစဉ်ဖြစ်သည်။